Qof kasta oo ku wareegsan ayaa raadineysa fudud siyaabaha ay u dhamaystiraan hawlaha ay. Waxaad dadka aad rabto in hab sahlan oo loo hayaa / ururinayaan files MP4 aad ku Mac iyo Windows. Sidaas awgeed, waxaan had iyo jeer waxaa ay u farsameeyaan dhib walba galay raaxada. Marka la eego hoos ku qoran yihiin 15 siyaabood oo ku biirtay / ururinayaan files MP4 on Windows iyo Mac.
Qeybta 1: Top 3 MP4 laambadihii lagu for Windows
Qeybta 2: Top 3 MP4 Video Converter u Mac
Qeybta 3: Top 3 MP4 laambadihii lagu macruufka
Qeybta 4: Top 3 MP4 laambadihii lagu for Android
Qeybta 5: Top 3 laambadihii lagu MP4 online
Hadda welwelka aad u falinjeeerka aad videos ka weyn tahay. Tani waa sababta oo ah waxaan doonayaa in aan idin ​​soo bandhigno trimmer aad u cajiib u ah Windows iyo in ka badan waa Wondershare Video Converter kale ma jiro. Converter video Tani kama dambaysta ah waa 30X dhaqso oo badasha video ee waqti aad u yar. Isbarbardhiga badan oo kale converters video shaaca ka qaaday in tani Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah oo dhan ugu fiican, sababtoo ah waa 30 jeer ka dhakhsi badan laambadihii kale. Converter video waxa uu leeyahay kala duwan oo ay ka buuxaan waafaqsan yahay 159 qaabab taageeray. Waxaad ku raaxaysan kartaa videos tayo fiican qiimo fiican. Waxaad ku raaxaysan kartaa videos tayada super la oolnimada sare video codec. Marka la eego hoos ku qoran waa link ee cajiibka ah falinjeeerka videos qalab. Sidaas si fudud waxaad kala soo bixi kartaa adigoo gujinaya link iyo ku raaxaystaan ​​videos tayo fiican leh xawaaraha weyn.
2. Windows Video Kan sameeyey 2012
Windows Movie Kan sameeyey 2012 waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan video laambadihii lagu for Windows. Trimmer video Tani for Windows waa lacag la'aan trimmer kharashka ka Microsoft. Windows movie sameeyey uu codsiga plunk ka baxay daruuriga daaqadaha. Tani video falinjeeerka aasaasiga ah qalab u taagan in ay ka mid oo dhan ugu fiican sababtoo ah waxa ay bixisaa dhowr cusub, muuqaalada waxtar leh. Astaamahani waa xallin doona dhammaan dhibaatooyinka video jaritaanka. Windows movie Kan sameeyey 2012 keensataa waxtarka ah ee xawaaraha hardware, oo horumari doona ilaa video diraya iyo xag-jirnimada. Trimmer Tani waxay sidoo kale bixisaa ah feature video xasilinta cusub, taas oo faa'iido u ah kuwa la kamaradaha aan dirqiyo habkaani noqon doonaa. Wax soo saarka ee videos waa h.264 by default. Laayeen of this Windows movie gaare 2012 uu deganaa isku mid u ah ka qeyb intooda badan laakiin ku mideysan yihiin audio waa u fududahay sida aad hadda jaleecada kartaa music adeegyada sida micro audio, dukaanka music vimeo, iyo archive music free. Waxaan ka Yeellay ka hawl aad u heli karto qalab la yaab leh oo ay si fudud u lagala soo xiriir ah la siiyo sida hoos.
Sony Vegas Pro waa sida mucjiso ee dunida joogo. Tani qalab video tafatirka uu ku leeyahay hanti badan. Software waxaa loo isticmaalaa inuu wax ka beddelo iyo jar videos. Waxa kale oo uu awood u leeyahay ka mid ah Goosashada iyo dhajinta videos. Tani software video tafatirka loogu talagalay in lagu soo saaro tayo sare leh HD videos. Tani waa codsi Windows ah. Haddii aad tahay qof oo shaqada waxaa sixiddiisa iyo falinjeeerka markaas software waxa uu la kulmi kartaa oo dhan u baahan in waqti lahayn. Version ayaa xirfadeed ee software waxaa ka mid ah qaar ka mid ah muuqaalada aad u faa'iido badan oo aan meesha joogin qoraalkii kale sida dayactirka images pixel yar iyo taageerada ballaaran ee kaararka qabsaday. Software waxay dabooshaa dhammaan baahida aqooneed iyo waxa aad u diiwaan. Waxaa ku taageeri karaan wax badan oo ka mid ah qaababka ay ka mid yihiin HD. Software waxa uu leeyahay saamayn badan oo audio iyo video tafatirka. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha ah trimmer cajiib ah, waayo, Windows. Fadlan download it.
Developer: Sony madadaalada shabakad caalami ah
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac waa xirmo dhameystiran noo. Waxaan dhihi karnaa in ay tahay nooc ka mid ah xirmada sameeyo-waxa-dhan qalab. Iyada oo taageero ah software waxa aad u bedeli karaan wax video iyo maqal ah galay inta badan qaabab loo isticmaalo. Tani waxay dhici doona oo dhan xawaare 30 mar dhakhso ugu badan tahay in ay jirto khasaaro kale ma jiro ee tayada. Oo tayo leh ayaa had iyo jeer sii joogi doonaa asalka. Waxaad ku qorshayso kartaa DVD kasta oo aad rabto in aad si aad awood u ciyaaro qalab kasta oo aad rabtid. Si fudud Saciiro oo nuqul ka DVDs la video degsado ka videos web iyo tafatirka kaliya sax ah. Hadda software-ka ayaa sidoo kale taageeraya codec hooyo sida Qaraarka Pro iyo Apple codec dhexe si aad u beddeli kartaa video inay qaab ku haboon iMovie. Ka qayb handiness by lays weydiiyaa software ah u wada ah, waayo, taasu waa dabcan dhakhso badan oo fudud. Marka la eego hoos ku qoran waa ay link. Fadlan download it.
Developer: Shirkadda Wondershare
2. Video suuf
Videos sixiddiisa software in mararka qaar niyad jebinaysaa iyo wax aad looga xumaado in dadka isticmaala cusub; Video gashto khusuusan badhaadho in laga noqdo waxyaabaha laga filayo ee intricacy. Software Tani waa ku haboon qof kasta oo ka walaacsan barashada aasaaska non toosan video tafatirka. Waxaa xidhaa oo dhan qalab muhiim ah iyo xitaa doorashada si taxadir ka doorteen mid ah qaababka ka xoogbadan ka badan. Waa software weyn bilowga ah kuwaas oo raadinaya helaan effortless galay video tafatirka. Software wuxuu taageeraa dhamaan noocyada file guud. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha of software this. Fadlan download it.
Developer: software NHC
3. Adobe Premier Qaybaha 13
Tani waa mid ka mid ah software ugu fiican ee Mac. Adobe jilitaankii Qaybaha 13 dalab ka shaqeynayaan cajiib ah si ay macaamiisha oo geliso wakhtiga khasab ah inay ka adkaadaan this xarunta qalab goynta video for Mac. Adobe jilitaankii Qaybaha 13 ayaa soo jeedinaya ah shiraac weyn dheeraad ah oo shaqada taas oo inta badan lagu sarraysiiyaa, hawlaha sir ah iyo saddex hababka shaqada kuwaas oo deg deg ah, hanuuniyey iyo khabiir. Adobe Premier Qaybaha 13 hide ugu qalabaysan yihiin heerka xirfadeed ee dadka isticmaala casri ah. Waa hagaag software waxa uu leeyahay tiro ah tayada. Waxaad si fudud u soo bixi kartaa ka link siiyey sida hoos.
iMovie waa mid ka mid ah kuwa qalabka tafatirka video jeclaa oo kasbatay magac weyn in industry. Tani qalab MP4 falinjeeerka waa ay Gordhaw Kadhoofaan. Waxaa aad u ogolaanaya in ay gaadhi qaar raacista tafatirka video fudud iyo codsan kala duwan oo badan oo kala duwan video mawduucyada. Mid ka mid ah in ka badan feature ku dhisnaa waa in ay tahay si ku tiirsan taabto, aad saamaxdo in ay weeraraan, qaaddaan oo aad u baran. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha ah qalab cajiibka ah. Si naxariis leh download it.
2. Iska yaree cute
Bedeli aad videos sida khabiir ku ah iyada oo aad iPad. Qalabkani waxa uu si buuxda u la kulmo baahida aad doorato. Waxaa gabi ahaanba waa bilaash ah iyo xirfad. Tani app macruufka waa barax-tiran ee qaababka ay. Waxaa jira waxyaalo badan oo ay app this kuwaas oo gebi ahaanba bilaash ah sida in ka badan 30 sawir qalab, u jeediya saamayn, in ka badan 20 changeovers pre qeexay iyo qaababka kale oo badan. App Tani waa run ahaantii wayn oo ka farxiyey meel wadaagaan waqti kasta oo internet ka mid ah oo kaliya click. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha of this app soo koobi kari. Fadlan download it.
Halkan waxaan ku soo war fiican kaliya ma ahan kooxo vimeo, laakiin sidoo kale dhammaan kale video tafatirka users app. Vimeo app ee macruufka ma aha oo kaliya sida ugu fiican ee aad u eegto, u maamusho, ugana sahamin videos on vimeo, laakiin waxa ay sidoo kale video app ah editor lacag la'aan ah macruufka. Iyada oo taageero ka app this, waxaad ka kacdeen kartaa videos effortlessly inay geliyaan videos in vimeo, ama aad dib u badbaadin kartaa videos in camera oo duudduuban u koombiyuutarka markasta oo aad rabto. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha ah app cajiibka ah. Fadlan download it.
Viddy waa app ah complimentary oo cusub oo aan caadi ahayn Android kaas oo u ogolaanaya fudud video trimmimg iyo in la wadaago. Waxaan edit karaa oo ay wadaagaan videos in ay kooxaha noo gaar ah. Waxa kale oo aanu u farsameeyaan karo noo gaar ah bulshada bulshada warbaahinta iyo wadaagi karaan videos noo daacad ah warbaahinta users Viddy onsocial. Viddy waa editor in video sidoo kale kasoo muuqan qaar ka mid ah music yaabo ay gallery. Music Taasi waxaa loo isticmaali karaa in aad videos iyo filimada. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha of this app ku dhisnaa. Si naxariis leh download it.
Tani app Android cajiib ah waxaa loogu talagalay goynta, falinjeeerka iyo tafatirka. App Tani waxay kaloo leedahay muujinta a ee ku daray music aad videos. Tani app Android gabi ahaanba waa bilaash ah si ay u isticmaalaan. Waxaad si fudud edit karaa videos jidka aad rabto. Waxaad ku dari kartaa qoraalka iyo mab in aad videos. Waxaad ka link siiyey sida hoos ku soo bixi kartaa cajiibka ah app.
Waa mid ka mid ah software tafatirka Android ugu fiican. Waxaa laga heli karaa oo dhan dhufto. Waxay leedahay waxyaalo badan oo la yaab leh kuwaas oo aad u fududahay in la isticmaalo. Jir ah dhaliyay, falinjeeerka iwm yihiin qaar ka mid ah muuqaalada this Android app. App Tani ma aha lacag la'aan laakiin intaadan gadan aad yeelan karaa dacwo oo lacag la'aan ah waxaa ka mid ah. Marka la eego hoos ku qoran waa xidhiidhiyaha of this Android app. Si naxariis leh download it.
1. Wincreator Video magaabay
Tani online mp4 video trimmer waa lacag kharash iyo aad u fududahay in la isticmaalo. Tani waa xirmo buuxda oo kor u qaadi doontaa tayada videos. Waxaad si fudud u qor kartaa "Wincreator Video magaabay" sanduuqa raadinta iyo ku raaxaystaan ​​tafatirka videos tayada cajiib ah oo sare.
Tani trimmer online taageertaa qaabab MP4. Waxaad si fudud u leeyihiin in ay geliyaan video ah on this online goobta ka dibna aad edit karaa video oo ay, falinjeeerka oo ku daray saamaynta sida aad u rabto in aad. Waxaad ka heli kartaa tan qalab yaab leh online.
3. Online video magaabay
Tani online video trimmer gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah aad dadka. Waxaad fudud u heli kartid, waxa uu online. Editor video Tani xidhaa oo dhan sifooyinka la jecel yahay. Sidaas si fudud aad ku yeelan kartaa xiiso weyn sixiddiisa aad videos.
> Resource > MP4 > 15 Siyaabaha ku milmaan / ururiso MP4 Faylal ay ku Mac iyo Windows